अनिल गुरुङ बेकह्यामलाई पछ्याएसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेडको फ्यान, अरु सेलेब्रिटी कुन क्लबका फ्यान ? - NepaliGoal.com
बुधवार , 12 डिसेम्बर 2018
Home » राष्ट्रिय फुटबल » अनिल गुरुङ बेकह्यामलाई पछ्याएसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेडको फ्यान, अरु सेलेब्रिटी कुन क्लबका फ्यान ?
Milan Shahi डिसेम्बर 2, 2017 राष्ट्रिय फुटबल Leaveacomment 616 Views
युरोपमा क्लब फुटबलको सिजनले मध्यान्तर छुनै लागेको छ । युरोपियन क्लब फुटबल विश्वकै महँगो त छ नै, सर्वाधिक पछ्याइनेमा पनि पर्छ । इंग्ल्यान्ड, स्पेन, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र पोर्चुगललगायत देशका लिगमा विश्वभरका महँगा स्टारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्छन् । च्याम्पियन्स लिगको ‘भ्यालु’ त अझ बढी हुने भइहाल्यो । यो वर्षको युरोपियन फुटबल यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि केही महिनापछि रसियामा हुने विश्वकपमा आफ्नो राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने अवसर खेलाडीलाई आउनेछ । त्यसैले अबको ६ महिना खेलाडीहरूले अझ उच्च प्रदर्शन गर्ने सम्भावना छ । नेपालमा पनि पछिल्लो दशक युरोपियन फुटबल पछ्याउने दर्शकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । युरोपियन क्लबका नेपाली समर्थकले फ्यान क्लब नै गठन गरेका पनि छन् । सर्वसाधारण मात्रै होइनन्, सेलेब्रिटी पनि फुटबल क्लबका समर्थक छन् ।
स्टेभन जेरार्डले लिभरपुलमा लोभ्याए
नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हेर्न प्रायः छुटाउँदैनन् । क्रिकेटका खेलाडी पारस फुटबल भने दर्शकका रूपमा ‘फलो’ गर्छन् । इंग्लिस क्लब लिभरपुर उनलाई मनपर्ने क्लब हो । ‘मैले ७–८ वर्षको हुँदादेखि लिभरपुलको समर्थन गर्दै आएको छु, लिभरपुलको फ्यान नै हुँ,’ खड्काले भने ।
लिभरपुलमा खड्काको मन स्टेभन जेरार्डले तानेका थिए । जब उनी सुरुतिर लिभरपुललाई पछ्याउँथे, तब बल दौडाउने जेरार्डको कलामा मोहित हुन्थे । जेरार्डको खेल रुचाएर लिभरपुलको फ्यान बनेका खड्का आजसम्म उही निर्णयमा छन् । जबकि जेरार्ड त्यसपछि लिभरपुल एकेडेमीको कोच भएर पनि रिटायर्ड भइसकेका छन् । लिभरपुलमा अहिले पारस खड्कालाई मन पर्ने खेलाडी हुन्, साडियो माने । ‘हिजो स्टेभन जेरार्डको खेल्ने शैली रुचाउँथेँ, आज साडियो मानेको । जे होस्, म निरन्तर लिभरपुलकै फ्यान हुँ,’ खड्काले बताए ।
मेसी जता, म उतै
पूर्वसभामुख एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङलाई फुटबल खेल निकै मन पर्छ । क्लब फुटबलका महत्वपूर्ण खेल हेर्न सकेसम्म छुटाउँदैनन् । मेसीको जादुले त उनलाई झन् फुटबल हेर्न बाध्य पारिदिएको छ । ‘बढी त अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नै फलो गर्छु, तर क्लबका महत्वपूर्ण खेल पनि छुटाउँदिनँ,’ नेम्वाङले सुनाए ।
मेसी मैदान उत्रिएपछि उनी डाइहार्ड फ्यान नै भए । ‘एक दशकयता मेसीलाई फलो गर्दै आएको छु । उनको खेल निकै मन पर्छ,’ नेम्वाङले अगाडि भने, ‘मेसीकै कारण म बार्सिलोनाको सपोर्टर बनेको छु । बार्सिलोना र मेसीको खेल हेर्न नभ्याउँदा पत्रिका र इन्टरनेटमार्फत अपडेट हुन्छु ।’
चार दशकदेखि लिभरपुलको डाइहार्ट फ्यान
कांग्रेस नेता उदयशमशेर राणा वहालवाला अर्थराज्यमन्त्री पनि हुन् । राजनीतिक मैदानका खेलाडी राणा फुटबल मैदानका नियमित दर्शक हुन् । बलिया क्लबका खेल हेर्न उनी छुटाउँदैनन् । नेता राणाको दिल पनि लिभरपुलमै बसेको छ, धेरै वर्षदेखि । ‘सन् १९८० तिर म बेलायतमा पढ्दाताका मैले क्लब फुटबल फलो गर्न थालेँ । त्यसवेला लिभरपुलको राम्रो खेलमा लोभिएर फ्यान नै भएँ,’ राणाले सुनाए ।
३७ वर्षअघि मन परेको लिभरपुल नेता राणालाई अहिले पनि उत्तिकै उत्कृष्ट लाग्छ । त्यसैले निरन्तर एउटै क्लबको फ्यान छन् । सुरुमा उनलाई पनि स्टेभन जेरार्डको खेलले नै लोभ्याएको रहेछ । ‘त्यो वेला स्टेभन जेरार्ड मनपर्ने मलाई अहिले फिलिप कौटिन्हो र साडियो माने राम्रा खेलाडी लाग्छन्,’ नेता राणाले भने ।
मेसीका कारण म्यानचेस्टरबाट बार्सिलोनामा
तेक्वान्दोका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी दीपक विष्ट पनि फुटबलको ‘क्रेजी’ दर्शक हुन् । उनी पनि क्लब लिग खुबै पछ्याउँछन् । विष्ट भने स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका फ्यान हुन् । तर, पहिले उनलाई अर्कै क्लब मनपथ्र्यो । पछि, बार्सिलोनातिर तानिएका हुन् । ‘पहिले म्यानचेस्टर युनाइटेडको फ्यान थिएँ, तर पछि बार्सिलोनातिर मन बस्यो,’ विष्टले भने, ‘लियोनल मेसीको उदयसँगै बार्सिलोनातिर सिफ्ट भएँ ।’
विष्टको नजरमा मेसी त्यति महान् खेलाडी सावित भए, जसका कारण क्लबप्रति हेर्ने उनको दृष्टिकोण नै बदलियो । मेसीकै कारण एक दशकदेखि उनी बार्सिलोनालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । ‘मेसी मलाई मैदानभित्र मात्रै होइन, मैदानबाहिर पनि उत्तिकै राम्रा लाग्छन् । त्यसैले फ्यानको रूपमा बार्सिलोनालाई मेरो साथ छ,’ विष्टले धारणा राखे ।
बार्सा र सिटीलाई पूरा समर्थन
कलाकार दीपकराज गिरीले सन् १९८६ को विश्वकप पूरा समय दिएरै हेरे । पूरा खेल हेर्दासम्म उनलाई अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोनाको कलाले लोभ्यायो । त्यही विश्वकपपछि अर्जेन्टिनाको समर्थक बनेका गिरीको मन लामो समयसम्म अरू खेलाडीले तान्न सकेनन् । बरु, अर्जेन्टिनाकै अर्का खेलाडी मैदानमा उदाए, लियोनल मेसी । म्याराडोनाको स्थान गिरीको नजरमा मेसीले पूर्ति गरिदिए । यसैकारण उनी मेसीले बाल्यकालदेखि खेल्दै आएको क्लब बार्सिलोनालाई समर्थन गर्छन् । ‘मलाई मनपर्ने मेसीले खेल्दै आएको बार्सिलोनालाई समर्थन गर्छु । इंग्लिस प्रिमियर लिग पनि फलो गर्ने म म्यानचेस्टर सिटीलाई समर्थन गर्छु,’ गिरीले भने ।
बेकह्यामलाई पछ्याएसँगै म्यानचेस्टर युनाइटेड
फुटबलर अनिल गुरुङले फुटबल पछ्याउन थाल्दा डेभिड बेकह्याम इंग्ल्यान्डका प्रमुख खेलाडी थिए । बेक्ह्याम त्यतिवेला म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट खेल्थे । बेकह्यामका कारण म्यान यूको फ्यान बनेका गुरुङ अहिलेसम्म निरन्तर उसकै समर्थनमा छन् ।
‘एसियाली देशका धेरै दर्शक म्यानचेस्टर युनाइटेडका फ्यान छन् । म पनि उसकै समर्थक हुँ । हुन त म्यान यूबाट खेल्ने रुनी पनि मलाई मन पर्ने खेलाडी हुन् । हाल उनले क्लब छाडिसकेका छन्, तर मेरो पहिलो रोजाइमा म्यान यू नै छ,’ फुटबलर गुरुङले भने ।
उनलाई मनपर्ने अर्का फुटबलर हुन्, पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो । रोनाल्डोले पनि पहिले म्यान यूबाटै खेलेका थिए ।
लाइभ खेल हेरेपछि म्यानचेस्टर सिटीमा मन
राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्लब फुटबल छुटाउने कुरै भएन । खेल सबै हेरेपनि विशेष खेलाडी, क्लब र देशलाई समर्थन भने जोकसैको हुन्छ । सिंह जर्मनीलाई समर्थन गर्छन् । ‘नेपाली फुटबललाई जर्मनीले सहयोग गरेको छ । मैले त्यहाँ गएर तालिम पनि लिएको छु । त्यसैले जर्मनको सपोर्टर हुँ,’ उनले बताए ।
पूर्वकप्तान सिंहलाई जर्मन गोलकिपर म्यानुअल नोयर मनपर्ने खेलाडी हुन् । ‘नोयरमा आधुनिक गोलकिपरमा हुने गुण छन् । गोलकिपिङसँगै पास दिने कौशल उस्तै राम्रो छ । गोडा, टाउको सबैले खेल्न सक्छन्,’ सिंहले बयान गरे । तर, क्लब फुटबलमा भने सिंहलाई म्यानचेस्टर सिटी मनपर्छ । ‘सन् २००९ मा बैंककमा सिटीले खेलेको लाइभ नै हेर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि निरन्तर उसको समर्थनमा छु,’ सुनाए ।
मेसी आएपछि अन्त छैन मन
अभिनेता सरोज खनाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्लब फुटबललाई खुब पछ्याउँछन् । खनाललाई पनि मेसी नै मन पर्छन् । मेसीको उदयसँगै अरू खेलाडीले मन जित्न नसकेको उनी स्विकार्छन् । ‘मेसी धरै शान्त छन्, खेल उस्तै राम्रो खेल्छन् । उनको फ्यान भएपछि बार्सिलोना नै मन पराउनु स्वभाविक नै भयो,’ उनले भने ।
खेलाडी मन परेपछि बार्सिलोनाको फ्यान
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि महत्वपूर्ण फुटबल खेल हेर्न छुटाउँदैनन् । समय मिलाएर रियल म्याड्रिड, बार्सिलोनालगायत क्लबका खेल हेर्छन्, उनी । ‘मलाई बार्सिलोनाका खेलाडी बढी मन पर्छन् । त्यसैले, बार्सिलोनाकै समर्थन गर्छु,’ उनले मेसीको प्रशंसा गर्दै अगाडि भने, ‘लियोनल मेसीको पास दिने र ड्रिब्लिङ गर्ने कला राम्रो लाग्छ । खेलाडी मन परेकै कारण बार्सिलोनाको फ्यान भइयो ।’
रोनाल्डोको जादुले रियलको समर्थक
गायक बद्री पंगेनी भने एउटा क्लबको मात्रै आफूलाई फ्यान ठान्दैनन् । उनलाई मनपर्ने दुईवटा क्लब छन् । ‘स्पेनिस क्लबमा रियल म्याड्रिड मन पर्छ र इंग्लिस क्लबमा आर्सनल,’ उनले भने, ‘आर्सनलमा सदाबहादर प्रशिक्षक आर्से बेंगर छन् भने रियल म्याड्रिडमा रोनाल्डोले जादु देखाउँछन्।’
पंगेनीलाई बेंगरको खेलाउने शैली राम्रो लाग्छ भने रोनाल्डोको खेल्ने तरिका । ‘ड्रिब्लिङ, बल कन्ट्रोल, पावरसुट, सबै उत्कृष्ट लाग्छ,’ उनले रोनाल्डोको बयान गरे । त्यसो त पहिले स्पेनका फर्नान्डो टोरेस पंगेनीलाई मनपर्ने फुटबलर थिए । नयाँ पत्रिकाबाट
Previous मेसीले भने रोनाल्डोसँग मित्रता हुँदैन
Next विश्वकप २०१८ को लागि कुन राष्ट्र कुन समूहमा ?
Copyright © 2014 - 2018 . All Rights Resereved. www.nepaligoal.com